China Wholesale Cheap Adjustable Spring Inorema Magnetic Massage Foam Fitness HuLa Hula Hoola Sports Fitness Mhete Hoop ine Kurema Mugadziri uye mutengesi | NQ
Wholesale Cheap Adjustable Spring Inorema Magnetic Massage Foam Fitness HuLa Hula Hoola Sports Fitness Mhete Hoop ine Kurema
Iyi Yemitambo Hoop Hoop yakagadzirirwa maererano nepanyama dzidziso, iyo inogona kusimudzira kurovedza muviri kusimba uye kukodzera muviri wako zvakakwana. Kana iwe uchida kudzikira uremu, iyi Sports Hula Hoop inzira iri nyore uye inoshanda;
"Maitiro eMagungano" Dhinda bhatani rimwe chete pamuviri, uye gungano zvakarongeka maererano nemavara akakodzera;
Kupfava uye kupora kwekunzwa kukwiza padivi uye andominal mhasuru.
Ichi chigadzirwa chakanakira kurasikirwa uremu uye kudzikisa kufutisa.
Hunhu: zvakatipoteredza zvine hushamwari, corronsion nemishonga, yakanaka inochinja, inopesana nekukwegura.
Yakakwirira degree rekurongeka, kutaridzika kwakanaka, kutsetseka pamusoro.
Hapana chepfu, abrasion nemishonga, ekunze nemishonga, kuramba kutonhora uye kwakanyanya tembiricha.
Inogona kukamurwa kuita zvikamu zvinoverengeka, uye iwe unogona kushandura hupamhi nekuderedza chikamu. Iwe unogona zvakare kuwedzera imwe jecha muchikamu chimwe nechimwe kuti uchinje huremu hwehula hoop kuti ikwane zvaunoda.
Ruvara: sekukumbira kwako
Kana iri nguva yako yekutanga kushandisa hoop, isa hoop pachiuno chako uye wotendeuka hoop nemaoko ako maviri. Wotendeuka chiuno chako kubva kuruboshwe uchienda kurudyi.
Paunenge wajairira iko kurovedza muviri, zvisinei nekwenongedzo yeiyo hula hoop,
Kutenderedza chiuno chako kubva kumberi kuenda kumashure kunosimbisa chiuno chako uye zvakare kuenzanisa muviri wako.
Paunenge uchitenderedza hula hoop, kana ukazunza maoko kubva kuruboshwe kuenda kurudyi, kubva kumberi kuenda kumashure, kana kubva kumusoro kusvika pasi, iwe unowedzera huwandu hweeerobic uye muviri wese kurovedza muviri.
Kwenguva yekutanga vashandisi, iwe unogona kuona kupwanya pane yako adnominal nyama uye chiuno nekuda kwekumanikidza kwemunwe uye meseji. Iwe unogona zvakare kunzwa kurwadziwa uye kushushikana.
- Nakidzwa uye uvandudze mwero;
- Furo padding yekuwedzera nyaradzo;
- Inotendera mushandisi kuti asimbise uye ataure iyo yepakati neyechiuno mutsetse;
- Shandisa nemaoko nemakumbo kutaura mapendekete, biceps, triceps, chiuno, zvidya uye glutes;
- Inovandudza kubatana uye kutsungirira;
- Kunonatsiridza Mwoyo Kugwinya,
- Yakakwirira kwazvo mazinga eCalori anopisa.
1pc / ruvara bhokisi, ipapo 10pcs / atorwa
Ruvara bhokisi saizi: 44.5x21.5x8.5cm
Saizi yekatoni: 47x46x44cm
NW / GW: 17 / 19kgs
Ane pamuviri, mukuru, munhu ane matambudziko akabatana, musana kana chiuno
Munhu ari pasi pekurairwa nachiremba
Usashandise hoop kunze kwekushandisa mudziyo.
Ruvara rungasiyana nekuda kwekugadzirwa kwezvinhu
Pashure: Vagadziri Vanodzika Matende Pop Up Wholesale Vatengesi Tenga Kunze Kwemusasa Tende
Zvadaro: Kupisa kutengesa Roller Wheel Exercise Equipment Dumbu Musuru Roller yeimba kurovedza muviri
Yemitambo Fitness Mhete Hoop
Akadhindwa kurovedzwa hwakanaka pu nedehwe mma bo ...
2021 New Good yepamusoro uremu muchiuno Exercis ...
Amazon inotengesa mushe Yakakwira Mhando Tsika Tsigiro B ...
Kumba kusimba Rally kusimba bhendi nylon yakazara res ...
Wholesale High Quality neketani Wrist Kumhanya Spor ...